Khasaaraha Naf Iyo Maal Ee Ciidamada Kenya Ka Jooga Soomaaliya – Goobjoog News
Khasaaraha Naf Iyo Maal Ee Ciidamada Kenya Ka Jooga Soomaaliya
Sida ay qortay warbaahinta Kenya, dalka Kenya si cad weli ugama hadlin khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray ciidamadiisa ka jooga Soomaaliya.
Ugu yaraan 1,000 oo Kenyaan ah ayaa la sheegayaa in ay ka dhinteen Kenya tan iyo 2011-dii kadib afduubkii labo dalxiise oo Faransiis ahaa.
Qoysas badan ayaa dhibaato ka soo gaartay kadib markii Soomaaliya lagu dilay qofkii biili jiray, dowladda Kenya weli dadkaasi ma siin wax mag-dhaw ah.
Khubaro xagga Militariga waxaa ay sheegayaan in dowladda Kenya ay Sh7,000 maalin walba ugu baxeyso si hal askari u sii joogo Soomaaliya, waxaa ku jira cunto, gaari-raac, caafimaad, xiriirka iyo biyaha, bishii Sh210,000 halka sanadka uu noqonayo Sh2.52 million.
Hadda gudaha Soomaaliya waxaa ku sugan illaa 4,000 oo ciidamo Kenyan ah, lacagta sanadkii ku baxeyso waa Sh10.08 billion.
Dhowr xog uruurin oo laga sameeyay gudaha Kenya, 68-70% dadka waxaa ay taageersan yihiin in ciidamada Kenya laga soo saaro Soomaaliya, 40% waxaa ay qabaan in Al-shabaab ay weeraro uga geysato gudaha Kenya sababta oo ah ciidamada Kenya oo jooga Soomaaliya.
Ruushka Oo Muranka Maraykanka Iyo W/kuuriye Ku Micneeyay Kan Carruurta Oo Kale
Dagaal culus oo saaka ka qarxay Baraawe
Dinijy drwugb Cialis free samples canadian pharmacy cialis 20mg
Xjvmxe vibvvl Buy generic viagra online cialis dosage 40 mg
Npncvn lxdike Buy generic viagra cialis coupon cvs
Ljaxxy rgwisy Order viagra online best online pharmacy
[url=https://cialistar.com/]cialis tadalafil 20mg tablets[/u...
viagra without prescription yahoo answers over the counter v...